Ikhaya » Iivenkile » umthetho wabucala
Enkosi ngokundwendwela i-802Quits.org kwaye uphonononge umgaqo-nkqubo wabucala. Ulwazi esilufumanayo luxhomekeke kwinto oyenzayo xa undwendwela indawo yethu. Umongo womgaqo-nkqubo wethu wabucala ulula kwaye ucacile: asizukuqokelela zinkcukacha ngawe xa undwendwela iwebhusayithi yethu ngaphandle kokuba ukhetha ngokuzithandela ukusinika olo lwazi, umzekelo, ngokufaka ulwazi kwifom ye-intanethi ngokuzithandela okanye usithumele imeyile.
Nantsi indlela esiphatha ngayo ulwazi malunga notyelelo lwakho kwiwebhusayithi yethu:
Ukuba awenzi nto ngexesha lotyelelo lwakho kodwa ukhangela kwiwebhusayithi, ufunde amaphepha, okanye ukhuphele ulwazi, siya kuqokelela kwaye sigcine ulwazi oluthile malunga notyelelo lwakho ngokuzenzekelayo. Isoftware yakho yesoftware ihambisa uninzi lolu lwazi kuthi. Olu lwazi aluchongi wena.
Siqokelela ngokuzenzekelayo kwaye sigcina kuphela ezi nkcukacha zilandelayo malunga notyelelo lwakho:
Idilesi ye-IP yamanani (idilesi ye-IP linani elinikezelwa ngokuzenzekelayo kwikhompyuter yakho ngalo lonke ixesha usiya kwiWebhu) apho ufikelela khona kwiwebhusayithi engu-802Quits.org. Isoftware yethu inokuzenza iimephu zeedilesi ze-IP kumagama e-Intanethi, umzekelo, "xcompany.com" ukuba usebenzisa iakhawunti yabucala yokufikelela kwi-Intanethi, okanye "eyakho ischool.edu" ukuba uqhagamshela kwisizinda seyunivesithi.
Uhlobo lwesikhangeli kunye nenkqubo yokusebenza esetyenziselwa ukufikelela kwiwebhusayithi engama-802Quits.org.
Umhla kunye nexesha ofikelela ngalo kwi-802Quits.org.
Amaphepha owandwendwelayo, kubandakanya nemizobo elayishwe kwiphepha ngalinye kunye namanye amaxwebhu owakhuphelayo, anjengePDF (iFomathi yoXwebhu oluPhathekayo) kunye namaxwebhu okulungisa amagama.
Ukuba uqhagamshele kwi-802Quits.org kwenye iwebhusayithi, idilesi yewebhusayithi. Isoftware yakho yeWebhu ithumela olu lwazi kuthi.
Sisebenzisa olu lwazi ukusinceda senze indawo yethu ibe luncedo ngakumbi kubakhenkethi- ukufunda ngenani labakhenkethi kwindawo yethu kunye neentlobo zetekhnoloji ezisebenzisa iindwendwe zethu. Asilandeleli okanye sibhale phantsi ulwazi malunga nabantu kunye notyelelo lwabo.
Icookie yifayile encinci yokubhaliweyo enokuthi ibekwe kwiWebhusayithi kwikhompyuter kwi-hard drive yakho, umzekelo, ukuqokelela ulwazi malunga nezinto ozenzayo kwindawo leyo okanye ukwenze ukuba ukwazi ukusebenzisa inqwelo yokuthenga kwi-Intanethi ukugcina umkhondo izinto onqwenela ukuzithenga. Icookie ihambisa olu lwazi kwiikhompyuter yewebhusayithi ethi, ngokubanzi, kuphela kwekhompyuter enokuyifunda. Uninzi lwabathengi abazi ukuba ii-cookies zibekwa kwiikhompyuter zazo xa zityelela iwebhusayithi. Ukuba ufuna ukwazi ukuba oku kwenzeka nini, okanye ukunqanda kungenzeki, unokuseta isikhangeli sakho ukuba sikulumkise xa iwebhusayithi izama ukubeka ikuki kwikhompyuter yakho.
Asikukhuthazi ukusetyenziswa kweicookies kwiWebhusayithi yethu. Ii-cookies zethutyana, nangona kunjalo, zinokusetyenziswa xa kukho imfuneko yokugqibezela intengiselwano okanye yokuphucula amava omsebenzisi wokusebenzisa le ndawo.
I-imeyile kunye neefom ze-Intanethi
Ukuba ukhetha ukuzichonga ngokusithumela i-imeyile okanye ngokusebenzisa iifom zethu ezikwi-Intanethi- njengaxa ucela izixhobo zokuyeka simahla; thumela i-imeyile kumlawuli wesiza okanye komnye umntu; okanye ngokugcwalisa enye ifom ngolwazi lwakho oluyimfihlo kwaye uluthumele kuthi ngewebhusayithi yethu - sisebenzisa olo lwazi ukuphendula umyalezo wakho nokusinceda ukuba sikufumane ulwazi olucelileyo. Siphatha ii-imeyile ngendlela efanayo nokuphatha iileta ezithunyelwe ku-802Quits.org.
802Quits.org ayiqokeleli ulwazi ngentengiso yorhwebo. Asizukuthengisa okanye siqeshise ulwazi lwakho oluchongiweyo kuye nakubani na.
Ukongeza kwi-imeyile, i-802Quits.org inokucela ulwazi lwakho lomntu siqu ukuze kuqhubekeke izicelo kunye neeodolo ezifumaneka nge802Quits.org. Imizekelo ibandakanya:
Isicelo sesixhobo sokuyeka simahla.
Yonke le misebenzi yenzelwe ngokuzithandela. Uya kuhlala unendlela yokwenza isicelo kwaye unikezele ngolwazi.
Ukuqhagamshelana namanye amaSayithi
Iwebhusayithi eyi-802Quits.org iqulethe amakhonkco kwezinye iiarhente zikarhulumente kunye nolunye uqoqosho okanye oovimba boluntu. Kumatyeli ambalwa, sinxibelelana nemibutho yabucala ngemvume yayo. Nje ukuba uqhagamshele kwenye indawo, uphantsi komgaqo-nkqubo wabucala wale ndawo intsha.
Sikuthatha nzulu kakhulu ukuthembeka kolwazi kunye neenkqubo esizigcinayo. Kananjalo, simisele amanyathelo okhuseleko kuzo zonke iinkqubo zolwazi eziphantsi kolawulo lwethu ukuze ulwazi lungalahleki, lusetyenziswe gwenxa okanye lutshintshwe.
Ngeenjongo zokukhusela isiza kunye nokuqinisekisa ukuba iinkonzo zethu ze-Intanethi zihlala zifumaneka kubo bonke abasebenzisi, sisebenzisa iinkqubo zesoftware ukujonga ukugcwala kwabantu ekuchongeni iinzame ezingagunyaziswanga zokufaka okanye zokutshintsha ulwazi okanye kungenjalo zenze umonakalo. Kwimeko apho uphando olugunyazisiweyo lokunyanzeliswa komthetho kunye nokulandela nayiphi na inkqubo yomthetho efunekayo, ulwazi oluvela kule mithombo lunokusetyenziswa ukunceda ekuchongeni umntu.
Ukhuseleko lwaMakhasi aBantwana kunye neMfihlo
I-802Quits.org ayijoliswanga kubantwana abangaphantsi kwe-18, kwaye ayazi ukuba iqokelele ulwazi lomntu kubantwana. Ngolwazi oluthe kratya malunga nemfihlo yabantwana ngokubanzi, nceda ubone iKhomishini yoRhwebo ye-Federal Umthetho woKhuseleko lwaBucala waBantwana kwi-Intanethi Iphepha lewebhu.
Siyathemba ukuba abazali nootitshala bayabandakanyeka kuphononongo lwabantwana kwi-Intanethi. Kubaluleke ngakumbi kubazali ukuba babakhokele abantwana babo xa abantwana becelwa ukuba banikezele ngeenkcukacha zabo kwi-intanethi.
802Quits.org ayiboneleli okanye ithengise iimveliso okanye iinkonzo zokuthengwa ngabantwana. Eyona nto ibaluleke kakhulu, kwimeko apho abantwana banikezela ngolwazi kwiwebhusayithi eyi-802Quits.org, isetyenziselwa kuphela ukuphendula umbhali, hayi ukwenza iiprofayili zabantwana
Utshintsho kule Mgaqo-nkqubo Wobumfihlo
Singahlaziya lo mgaqo-nkqubo amaxesha ngamaxesha. Ukuba senza naluphi na utshintsho olunzulu siya kukwazisa ngokuthumela isaziso esibalulekileyo kumaphepha ethu. Le yingxelo yomgaqo-nkqubo kwaye akufuneki itolikwe njengesivumelwano salo naluphi na uhlobo.
Ulwazi oluthe kratya malunga nokuKhangela ngokuKhuselekileyo
IKhomishini yoRhwebo kaRhulumente unikezela ngolwazi olubalulekileyo malunga nokukhuseleka okukhuselekileyo.
ISebe lezeMpilo laseVermont
Isitalato i-108 Cherry, Suite 203
IBurlington, UV 05401